तेस्रो टिभिएस अपाचे पोखरा स्पोटस् अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रा.डा. गुरुङलाइ | Jukson
पोखरामा यही जेठ १८ गते हुने तेस्रो टिभिएस अपाचे पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्ड २०७४ मा मनोनयनमा पर्न सफल खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, कास्कीले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उत्कृष्ट तिनको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो ।
पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्डको सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुषमा कमलबहादुर भण्डारी (शारिरिक सुगठन), करण केसी (क्रिकेट) र तिलक पुन मगर (आर्चरी) मनोनयनमा परेका छन् । अवार्ड समारोहमा सर्वोत्कृष्ट छनोट गरी टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल, दोसल्ला सहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ । सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी महिलातर्फ बिमला नेपाली (सितेरियो कराँते), कमला पुन (हक्की) र केशरी आले मगर (आर्चरी) मनोनयमा परेका छन् । अवार्ड जित्नेले टिभिएस विगो स्कुटर, ट्रफी र दोसल्लाका साथ पुरस्कृत हुने मञ्च कास्कीले जनाएको छ ।
खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले यस वर्ष लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट खेल पूर्वाधारका अभियन्ता प्रा.डा. वीरेन्द्रसिंह गुरुङलाई सम्मान गर्ने भएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्व रहेर पनि पोखरामा खेलकुदका विकासमा उनको योगदानको कदर गर्दै मञ्चले सम्मान गर्न लागेको हो । उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्व प्रमुख हुन् । पोखरामा हक्की खेल भित्राउने श्रेय उनलाई नै जान्छ । लनटेनिससँगै अहिले लोकप्रिय बनेको क्रिकेट खेलको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
क्षेत्र नं ३ कास्की बामगठबन्धनको घर दैलो कार्यक्रम आज अन्नपुर्ण गाउपाकिा का को उरीमा, पुल, बाटो, स्वाथ्य चौकी टेलीफोन अनि शान्ति सुरक्षाको ब्यबस्था र्गनुर्पनेमा स्थानियको भनाई ।